အမေရိက၏ထိပ်တန်း 10 နိုင်ငံထူထောင်သူဖခင်ကြီး
သမိုင်း & ယဉ်ကျေးမှု အမေရိကန်တော်လှန်ရေး
အမရေိ Found ကူညီနေသူတချို့ကသိသိသာသာကိန်းဂဏန်းများမှာတစ်ဦးကမျှော်
အဆိုပါထူထောင်သူဖခင်ကြီးများကသူတို့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည် မြောက်အမေရိက 13 ဗြိတိသျှကိုလိုနီ တို့သည်ဂရိတ်ဗြိတိန်၏နိုငျငံတျောဆန့်ကျင်အမေရိကန်တော်လှန်ရေးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍကစားနှင့်လွတ်လပ်ရေးပြီးနောက်လူမျိုးသစ်၏တည်ထောင်အနိုင်ရသူ။ အမေရိကန်တော်လှန်ရေး, အဖွဲ့ချုပ်များ၏ဆောင်းပါးများ, နှင့်အပေါ်ကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းအများကြီးထက်ပိုတစ်ဆယ်တည်ထောင်သူရှိခဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ။ သို့သော်ဤစာရင်းအထင်ရှားဆုံးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းကိုစတင်တည်ထောင်သူသညျဘိုးဘေးကောက်ရန်ကြိုးစားသည်။ မပါဝင်ထင်ရှားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းများမှာ ဆရာယောဟနျ Hancock ဟာ , ဆရာယောဟနျမာရှယ် , Peyton Randolph နှင့် ယောဟန်ကိုဂျေး ။
"အဘတို့ထူထောင်သူ" ဟူသောဝေါဟာရကိုမကြာခဏ၏ 56 လက်မှတ်ထိုးသူကိုရည်ညွှန်းအသုံးပြုသည် လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်း ဒါဟာအသုံးအနှုန်းနှင့်အတူရောထွေးမဖြစ်သင့် 1776. ခုနှစ်တွင် "framerate ။ " ဟုအဆိုပါအမျိုးသားမော်ကွန်းတိုက်မှအဆိုအရ framerate သည့် 1787 ဖို့ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသည် အခြေခံဥပဒေကွန်ဗင်းရှင်း သူကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အဆိုပြုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲ။
တော်လှန်ရေးနေ့ပြီးနောက်နိုင်ငံထူထောင်သူဖခင်ကြီးအစောပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အရေးကြီးသောရာထူးကျင်းပရန်သွား ဖက်ဒရယ်အစိုးရ ။ ဝါရှင်တန်အဒမ်, ဂျက်ဖာဆန်နှင့် Madison အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ။ ယောဟနျသဂျေးနိုင်ငံ၏ပထမဦးဆုံးခနျ့အပျခဲ့ တရားသူကြီးချုပ် ။
ရောဘတ် Longley အားဖြင့်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်
ဂျော့ခ်ျဝါရှင်တန် - ထူထောင်သူခမညျးတျော
ဂျော့ခ်ျဝါရှင်တန်။ Hulton မော်ကွန်းတိုက် / Getty Images
ဂျော့ခ်ျဝါရှင်တန်ပထမ Continental ကကွန်ဂရက်၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်ထို Continental ကကြည်းတပ်ဦးဆောင်လမ်းပြရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သူ၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခဲ့သည် အခြေခံဥပဒေကွန်ဗင်းရှင်း များနှင့်သင်တန်း၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ပထမဆုံးသမ္မတဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤအရာအလုံးစုံခေါင်းဆောင်ပိုင်းရာထူးများတွင်သူရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဇွဲပြအမေရိကတိုက်ဖွဲ့စည်းမယ်လို့အဆိုပါရှေးထုံးများနှင့်အမြစ်ကိုဖန်တီးကူညီပေးခဲ့သည်။ နောက်ထပ် "
ယောဟန်သည်အဒမ်, United States ကိုဒုတိယသမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ပုံတူ။ ချားလ်စ် Wilson က Peale, 1791. လွတ်လပ်ရေးနေ့အမျိုးသားသမိုင်းဝင်ပန်းခြံအားဖြင့်ရေနံ
ယောဟန်သည်အဒမ်ပထမနဲ့ဒုတိယ Continental Congress နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အရေးပါတဲ့ကိန်းဂဏန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူရေးဆွဲရန်ကော်မတီအပေါ်ခဲ့တာ လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်း နှင့်၎င်း၏ကလေးမွေးစားရန်ဗဟိုဖြစ်ခဲ့သည်။ သောကြောင့်မိမိအမြော်အမြင်များ၏, ဂျော့ခ်ျဝါရှင်တန်ဒုတိယ Continental ကကွန်ဂရက်မှာ Continental ကတပ်မတော်တပ်မှူးအမည်ရှိခဲ့သည်။ သူညှိနှိုင်းရန်ကူညီရန်ရှေးခယျြခဲ့ ပဲရစ်၏စာချုပ် တရားဝင်အဆုံးသတ်ကြောင်း အမေရိကန်တော်လှန်ရေး ။ သူကနောက်ပိုင်းတွင်ပထမဦးဆုံးဖြစ်လာခဲ့သည် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ , ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဒုတိယသမ္မတအဖြစ်။ နောက်ထပ် "
သောမတ်စ်ဂျက်ဖာဆန်, 1791. Credit: ကွန်ဂရက်စာကြည့်တိုက်
သောမတ်စ်ဂျက်ဖာဆန်, ဒုတိယ Continental ကကွန်ဂရက်မှကိုယ်စားလှယ်သကဲ့သို့, ရေးဆွဲမယ်လို့ငါးတစ်ကော်မတီ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည် လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်း ။ သူကတညီတညွတ်တည်းအဆိုပါကြေညာစာတမ်းရေးသားဖို့ကောက်ယူခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်တော်လှန်ရေးနေ့ပြီးနောက်သံတမန်အဖြစ်ပြင်သစ်နိုင်ငံကိုစေလွှတ်ပြီးတော့ယောဟန်ကိုအဒမ်အောက်တွင်ပထမဦးဆုံးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်ထို့နောက်တတိယသမ္မတဖြစ်လာမှပြန်လာသောခဲ့သည်။ နောက်ထပ် "
ဂျိမ်း Madison, အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏စတုတ္ထနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်။ ကွန်ဂရက်, Print & ဓာတ်ပုံများဌာနခွဲ, LC-USZ62-13004 ၏စာကြည့်တိုက်
J ကို သူကအများကြီးရေးသားခြင်းများအတွက်တာဝန်ရှိခဲ့မှုအတွက် Ames Madison, ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ခမညျးတျောအဖြစ်လူသိများခဲ့သည်။ နောက်ထပ်ဂျွန်ဂျေးနှင့်အတူ အလက်ဇန်းဒါး Hamilton က သူဟာ၏စာရေးဆရာများထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် ပြည်ထောင်စုစာတမ်းများ သစ်ကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလက်မခံဖို့ပြည်နယ်များစည်းရုံးကူညီပေးခဲ့သညျ။ သူအစိုးရသစ်စုစည်းပြီးကူညီပေးခဲ့သည်နှင့်အနောက်ပိုင်းတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏စတုတ္ထသမ္မတဖြစ်လာခဲ့သည် 1791. ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှဆက်ပြောသည်ခဲ့အခွင့်အရေးဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ် "
ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Franklin ၏ပုံရိပ်ကို။ အမျိုးသားမော်ကွန်းတိုက်
ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Franklin တော်လှန်ရေးနေ့နောက်ပိုင်းတွင်အခြေခံဥပဒေကွန်ဗင်းရှင်း၏အချိန်အားဖြင့်အကွီးအကဲနိုငျငံရေးထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ သူကဒုတိယ Continental ကကွန်ဂရက်မှကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူရေးဆွဲခဲ့ကြောင်းငါးခု၏ကော်မတီ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်း နှင့်ဂျက်ဖာဆန်သည်သူ၏နောက်ဆုံးမူကြမ်းတွင်ထည့်သွင်းကြောင်းပြင်ဆင်ချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Franklin ဟာအမေရိကန်တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းပြင်သစ်အကူအညီရတဲ့ဗဟိုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူလည်းညှိနှိုင်းနှင့်အတူကူညီပေးခဲ့သည် ပဲရစ်၏စာချုပ် စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ကြောင်း။ နောက်ထပ် "
ရှမွေလသည်အဒမ်။ ကွန်ဂရက် Print & ဓာတ်ပုံများ၏စာကြည့်တိုက်: LC-USZ62-102271
ရှမွေလသည်အဒမ်စစ်မှန်သောတော်လှန်ရေးသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကလစ်ဘာတီရဲ့သား၏တည်ထောင်သူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဟာစုစည်းကူညီပေးခဲ့သည် ဘော်စတွန်လက်ဖက်ရည်ပါတီ ။ သူကပထမဦးဆုံးနှင့်ဒုတိယအ Continental Congress နှစ်ဦးစလုံးမှကိုယ်စားလှယ်ကြီးများနှင့်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းအဘို့စစ်တိုက်ကြ၏။ သူလည်းအဖွဲ့ချုပ်များ၏ဆောင်းပါးများရေးဆွဲကူညီပေးခဲ့သည်။ သူမက်ဆာချူးဆက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးကူညီပေးခဲ့သည်နှင့်၎င်း၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ် "
၏ခမည်းတော်နှင့်အာဘော်ထူထောင်သူသောမတ်စ်နာကျင်မှု, "မှာ Common Sense ။ " ။ ကွန်ဂရက်, Print နှင့်ဓာတ်ပုံများဌာနခွဲ၏စာကြည့်တိုက်
သောမတ်စ်နာကျင်မှု သူကဂရိတ်ဗြိတိန်ထံမှလွတ်လပ်ရေးများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအငြင်းအခုံရေးသားခဲ့သည် 1776. ခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်ကြောင်းမှာ Common Sense ဟုခေါ်သောအလွန်အရေးကြီးသောလက်ကမ်းစာစောင်၏စာရေးဆရာဖြစ်ခဲ့သည်။ လိုအပ်ခဲ့လျှင်မိမိအလက်ကမ်းစာစောင်အများအပြားကိုလိုနီနှင့်ဗြိတိသျှဆန့်ကျင်ဖွင့်လှစ်ပုန်ကန်မှု၏ပညာ၏တည်ထောင်သူသည်ဘိုးဘေးတို့ယုံကြည်စိတ်ချသွားတယ်။ ထို့ပြင်သူကစစ်တိုက်ခြင်းငှါစစ်သူရဲအပေါ်လှုံ့ဆျောကကူညီပေးခဲ့သောတော်လှန်ရေးစစ်ပွဲကာလအတွင်းအဆိုပါအကျပ်အတည်းဟုခေါ်တွင်သည်အခြားလက်ကမ်းစာစောင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ နောက်ထပ် "
ပက်ထရစ်ဟင်နရီအစောပိုင်းရက်စွဲမှာဂရိတ်ဗြိတိန်စစ်ချီပြောဆိုရန်မကြောက်ခဲ့သူတစ်ဦးအစွန်းရောက်တော်လှန်ရေးသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကလိုင်းပါဝင်သောသူ၏မိန့်ခွန်းအဘို့အအကျော်ကြားဆုံးဖြစ်ပါတယ် "ငါ့ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးပါဒါမှမဟုတ်ငါ့ကိုအသေသတ်ခြင်းကိုအားပေးရမည်။ " သူကတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းဗာဂျီးနီးယား၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင်ဖို့အခွင့်အရေးဥပဒေကြမ်း၏ထို့အပြင်ဘို့စစ်တိုက်ကူညီပေးခဲ့သ အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် သူဖြစ်သောကြောင့်ယင်း၏ခိုင်မာတဲ့ဖက်ဒရယ်အာဏာသဘောမတူထားတဲ့နဲ့စာရွက်စာတမ်း။ နောက်ထပ် "
အလက်ဇန်းဒါး Hamilton က
အလက်ဇန်းဒါး Hamilton က။ ကွန်ဂရက်၏စာကြည့်တိုက်, ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံများဌာနခွဲ, LC-USZ62-48272
Hamilton ကတော်လှန်ရေးစစ်ပွဲအတွင်းစစ်တိုက်ကြ၏။ သူကအမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်များအတွက်ကြီးမားတဲ့ထောက်ခံအားပေးခဲ့သူအခါဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အရေးပါမှုစစ်ပွဲပြီးနောက်အကြောင်းကိုရောက်လာတယ်။ သူကဂျွန်ဂျေးနဲ့ James Madison တို့နှင့်အတူ, အရေးသားခဲ့သည် ပြည်ထောင်စုစာတမ်းများ စာရွက်စာတမ်းထောက်ခံ secure ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှု၌တည်၏။ ဝါရှင်တန်ပထမဦးဆုံးသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရပြီးတာနဲ့ Hamilton ကဘဏ္ဍာရေး၏ပထမဦးဆုံးအတွင်းရေးမှူးကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ၎င်း၏ခြေထောက်ပေါ်သစ်ကိုတိုင်းပြည်ရတဲ့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစီးပွားရေးအရသစ်ကိုသမ်မတနိုငျငံအတှကျအသံဘဏ္ဍာရေးအခြေခံဖွဲ့စည်းအတွက်နျဆာပခဲ့သည်။ နောက်ထပ် "
ခမညျးတျောထူထောင်သူ Gouverneur မောရစ်။ ကွန်ဂရက်၏စာကြည့်တိုက်, ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံများဌာနခွဲ, LC-USZ62-48272
Gouverneur မောရစ်ပြည်ထောင်စုတစ်ဦးနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲတစ်ဦးချင်းစီပြည်နယ်များ၏စိတ်ကူးလိုက်ခြင်းသည်တစ်ခုအောင်မြင်သောနိုငျငံရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကဒုတိယ Continental ကကွန်ဂရက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အကဲ့သို့သောဗြိတိသျှဆန့်ကျင်သည်သူ၏ရန်ပွဲများတွင်ဂျော့ခ်ျဝါရှင်တန် back up လုပ်ထားဖို့ဥပဒေပြုခေါင်းဆောင်မှုပေးကူညီပေးခဲ့သည်။ သူကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ အဖွဲ့ချုပ်၏ဆောင်းပါးများ ။ သူဖြစ်နိုင်သည်ယင်း၏နိဒါန်းအပါအဝင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏အစိတ်အပိုင်းများရေးသားခြင်းနှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုကြသည်။
အမေရိကန်တော်လှန်ရေး: Yorktown ၏တိုက်ပွဲ
အမေရိကန်တော်လှန်ရေး: ဗိုလ်ချုပ်ယောဟနျသ Stark
အမေရိကန်တော်လှန်ရေး: ဗိုလ်ချုပ်ဝီလျံအလက်ဇန်းဒါး, သခင် Stirling
အမေရိကန်တော်လှန်ရေး: Guilford တရားရုံးအိမ်၏တိုက်ပွဲ
Paintball Guns စကျင်ကျောက်ရိုက်နိုင်ပါသလား?
တစ်ဦး Quoin ကဘာလဲ? အဆိုပါထောင့်ကျောက်ခဲ
သိပ္ပံနည်းကျ Hypothesis ဥပမာများ
Saigo Takamori: အဆိုပါနောက်ဆုံးဆာမူရိုင်း
ဥရောပမှာရှိတဲ့ Black ကမရဏ၏ဆိုက်ရောက်ဗီဇာနှင့် Spread
အားလုံး decompress ဖြားနာအကြောင်း
အီတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် Toussaint Louverture ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
လေဖြတ် Play စစည်းကမ်းများအနေဖြင့်မည်သို့ပွဲစဉ် Play စစည်းကမ်းများကွဲပြားခြားနားသော
D-Day ကိုအကြောင်းကို quotes
လူတိုင်းအယ် Watch သင့်သ5အကောင်းဆုံးအကြောင်းရင်း
10 အကောင်းဆုံး '' SpongeBob SquarePants '' ဇာတ်လမ်းတွဲများ
Kinetic Energy ကအဓိပ္ပာယ်
အဆိုပါ Mohs စမ်းသပ်ခြင်း Perform ရန်ကဘယ်လို
Hack ခြေလျင်ခရီး: သင်တစ်ဦး Bandana ကိုသုံးပါနိုင်သလား4နည်းလမ်းများ